Sida loogu rakibo Pokemon wadan kasta | Wararka IPhone
Ma noqon doonno dhexdhexaad kaliya oo aan kugu buuxin Pokemon Go. Nintendo wuxuu ku noolyahay dhalinyaro labaad mahadnaqa taxane ka badan iskudarka, runtii, waxaan ka hadleynaa Pokemon. Bilaabashadan cusub ee adduunka ee teknolojiyadda moobiilka ee caqliga badan, oo la jaanqaadaya 'Augmented Reality', ayaa sababtay xanaaq dhab ah Si kastaba ha noqotee, bilawga istaandarka ayaa loo joojiyay sababo la xiriira, iyo isticmaalayaasha iOS ee Spain ayaa sugaya inay awoodaan inay ciyaaraan Pokemon Go. Laakiin ha ka welwelin, Waxaan dooneynaa inaan ku tusino sida loo rakibo Pokemon GO taleefankaaga iPhone inkasta oo aad joogtid Spain.
Mareykanka, New Zealand, iyo Australia waa wadamada kaliya ee Pokemon Go hada si toos ah loogala soo bixi karo App Store. Laakiin tani waxay leedahay xal, Waxaan kuu sheegeynaa sida loo rakibo Pokemon Go:
Waxaan u baahanahay inaan ka abuurno aqoonsi Apple cusub Halkan.
Waa muhiim in cinwaankeenna, aan ka xulanno meel ka mid ah waddan laga heli karo, taas oo ah, tusaale ahaan annaga ayaa dooranay THIS.
Goobteenna, sidoo kale waxaa muhiim ah in aan dooranno waddan la heli karo, waan xusuusan nahay, New Zealand, Australia iyo Mareykanka.
Waxaan ku xusuusineynaa in Pokemon Go uu yahay codsi bilaash ah, sidaa darteed waa inaanan galin biil ama macluumaad bangi haddii aynaan rabin.
Mar alla markii aan abuurnay Aqoonsigan gaarka ah ee Apple, waxaan aadi doonnaa Settings-ka iPhone-ka, halkaasna qeybta guud waxaan aadi doonnaa «luqadood y Gobol«, Si loogu beddelo mid ka mid ah saddexda gobol ee ciyaarta laga heli karo, waxaa lagugula talinayaa inaan isticmaalno isla cinwaanka aan galnay.
Shaqadii waa la qabtay kaliya waa inaan tagnaa barnaamijka 'Sotre App' oo soo dejiso Pokemon Go oo leh dhammaan nabadda maskaxda adduunka, laakiin taxaddar, maxaa yeelay waxaa jira codsiyo badan oo la mid ah oo loogu talagalay in lagu khiyaaneeyo. Wax walba waxaa lagu keydiyaa daruurta, marka Pokemon Go markuu yimaado Spain waxaan beddeli karnaa gobolka iyo Apple ID mar kale oo waan sii wadan karnaa ciyaarta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Casharrada iyo buugaagta » Sida loo rakibo Pokemon wadan kasta
Waxaan ku noolahay dalka Mareykanka walina ma isticmaali karo, mana garanayo sababta, waxay ii sheegaysaa inaan isku dayo mar dambe hadana wali ma isticmaali karo barnaamijka.
Kuma raacsani inay had iyo jeer diraan si ay uga abuuraan waddamo kale nacas cusub. iyo wixii ku saabsan App-ka,
MAQAAN MAXAMED dijo
Way fududaan laheyd haddii qof dejin u soo diro ipa-ka barnaamijka oo uu ka soo rakibo iTunes
Kajawaab MAX POWER
In buskud ay ka heli .ipa ah
DIGNIIN !! Markaad iska diiwaangeliso koontadaada gmail, Pokenon Go waxay leedahay wadarta marin u helka koontadaada, kumana digayaan laakiin haddii aad gasho koontadaada g mail oo aad hubiso codsiyada la xiriira waad arki kartaa. Ha ku isticmaalin ciyaarta koontadaada gmail, ku abuuri mid taas kaliya ama isticmaal mid kale oo aan ahayn koontadaada ugu weyn
Carlos oo ka yimid Nicaragua dijo
Waxaan ku soo dejistay VSHARE dhibaato la'aan
Ka jawaab Carlos oo ka socda Nicaragua
Waxaan falanqeyneynaa Mee Audio x7 Plus, sameecadaha dhagaha ee cajiibka ah ee Bluetooth